တရုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူတစ်တောင်တက်အတွေ့အကြုံကို | FC အသင်း
ကျနော်တို့ကွမ်ကျိုးအတွက် Tiantang Peak ကိုတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Tiantang Peak တရုတ်နည်းလမ်းများကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ 1210 meters.Tiantang ၏အမြင့်နှင့်အတူကွမ်ကျိုးအတွက်အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ဒီအထွတ်အထိပ်ကောင်းကင်သို့အနီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုတာကလှပတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကကားဖြင့်နံနက်ယံ၌ 8:00 နာရီအချိန်မှာစတင် 9:00 pm တွင်အကြောင်းကိုတောင်ခြေရောက်ရှိမည်။ ထိုသို့ငါတောင်ကိုတက်သောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး, ကောင်းသောသတင်းနေ့မှာအနည်းငယ်နေရောင်နှင့်အတူမိုဃ်းမရွာ, ကယ့်ကိုအကောင်းသောရာသီဥတုဖြစ်ပါတယ်စဉ်ကဆက်ဆက်ငါ့အဘို့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
တောင်တက်ခှနျအားစိုကျထုကိုဆိုလိုသည်။ ငါနီးပါးငါခဏတက်ပြီးနောက်အချိန်ကြာမြင့်စွာငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်ရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့တက်ပြီးသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, သင်တွန့်ဆုတ်မဖြစ်ရပါမည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, နှလုံးမူအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးထိုသို့လေးလံသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ငါကပိုတောငျပျေါ၏ထက်ဝက်ထက်မှတက်သောအခါ, ငါရေအလုံအလောက်မဖြစ်အံ့သောငှါသဘောပေါက်ဒါကြောင့်ကျနော်သတိရှိရှိရေသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. , ဒါပေမယ့်ငါတောင်ထိပ်သို့ရောက်ရှိသောအခါငါနေဆဲပြန်ကိုင်ဘူး, ငါကသောက်၏။ ငါသည်သူတို့၏ကယ်ဆယ်ရေးများအတွက်အသင်းဖော်အလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်, မဟုတ်ရင်သိပ်ဆိုးပါလိမ့်မယ်။ ရေပြတ်လပ်မှုကယ့်ကိုတစ်ဦးအလွန်လေးနက်သောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ထိပ်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်မြေပြင်ပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမစိမ်းသောပျိုးပင်ရှိပါသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အခြို့သောအဝါရောင်မြက်ဖြစ်ကြသည်။ မိုဃ်းကောင်းကင်ကအရမ်းတောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လေတိုက်အလွန်အဆင်ပြေသည်အလွန်ကြီးမား
ငါတောင်ပေါ်ကဆင်းသွားသောအခါငါသည်ငါ့ချွေးခြောက်သွေ့တဲ့လွခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိပေမယ့်ငါ့မျက်နှာကိုသဲကဲ့သို့ဆားမထိပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကခံစားချက်ကအရမ်းဆိုးရွားသည်။ ငါသည်အစာအာဟာရဖြည့်စွက်ဖို့တချို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိုရည်ရောက်စေဖို့သတိရသင့်တယ်လာမယ့်အချိန်လို့ထင်ပါတယ်။ စကားကိုတတ်သကဲ့သို့, တောငျကိုတက်လွယ်ကူသည်ကတောင်ပေါ်ကဆင်းသွားကြဖို့ခက်ခဲသည်။ ဤအချိန်ငါတကယ်ကသဘောပေါက်လာတယ်။ အဆိုပါတောင်စောင်းနေဆဲမတ်စောက်သည် ဖြစ်. ငါသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားအချို့ကူညီပံ့ပိုးရန်ရုန်းကန်နေခဲ့ကြပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါသည်နေဆဲခရီးပြီးပါကအပေါ်အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။
မိတ်ကပ်လက်လီ Display ကို , Glass ကို Display ကိုဟန်ပြ , Glass ကိုဟန်ပြဝန်ကြီးအဖွဲ့, Cosmetic Shop Counter Design, Glass Jewelry Showcase, Optical Shop Decoration,